Waxaan Ku Jeclaaday Hal Maalin Waxaana ku waayay Hal Erey (sheeko xiiso leh) | Calafka.net	Wednesday, April 23rd, 2014	Home
Waxaan Ku Jeclaaday Hal Maalin Waxaana ku waayay Hal Erey (sheeko xiiso leh)
Oct 4, 2012 - 4 Jawaabood	ShareAragtidii ugu horeeysay ayay Maano si lama filaan ah dareen dhab ah ugu qaaday Saleebaan waxayna mar qura dareentay qalbigeeda oo is badalay niyadii oo meel kale u iilatay, waxayna aragtay iyada oo eegmo naxariiseed la dabo gashay Saleebaan.
Saleebaan waxa uu la socdaa saxiibkiis Muniir waxayna ka soo baxeen dukaan ku yaal xaafada Islii ee dalka Kenya oo ay alaab ka soo gadanayeen, waxayna horay u sii qaateen wadadii ay ku yimaadeen ilaa ay ka Libdhaan ama ka qarsoomaan Indhaha Maano.
Maano iyada oo is leh malaha waxbaa kaa qaldan ayay goobtii si caga jiid ah uga dhaqaaqday waxayna u sii gudubtay goobtii ay ku wajahnayd oo ay kula balan sanayd Saxiibteed Luuleey.
Luul ayaa waxa ay dareentay in wax ka qaldanyihiin Maano, markaasay ku biloowday Maanta maxaa qof daalan ayaad u ektahay miyaadan xalay seexan, mise waad xanuun santahay? waxaa kaa muqata Ilgooyo aan caadi ahayn Indhahaguna waa Gaduud.
Maana ayaa la soo booday Walahay dheh, saxiibeey hadaan kuu waramo waxaan manta arkay qof aana u malaynayn in isaga oo kale uu dunidan ku noolyahay.
“Waxa uu ahaa qof isoo jiitay muuqaal ahaan, waxa i dilay indhojeceyl oo Alle ku manaysatay, Qaabka Labiska, socodka iyo cod macaan oo aan dhagahayga ku maqlay markii uu la hadlayay yarkii la socday, Mataqaan? waxa uu ka soo baxay dukaanka Xaaji Muuminâ€ hadaladaas tirada badan waxa ay ka soo burqanayeen afka Maano oo luul u waramaysa Halka ay Luul aad ula yaabanayd waxa ka yeeraya saxiibteed oo ay ku taqaanay edeb iyo daganaansho, isla markaana aan ahayn qof ay uga baratay in ay raga isku lurto.
Luul oo si weyn u dareentay waxa la soo darsay saxiibteed Maano ayaa ku tiri bal shaaha cab oo is daji Nin Islii jooga lama weynayee.
Xogaa kaftan iyo sheeko dhex martay Maano iyo Luul kadib waxaa lagu balamay in la raadiyo Qofka Mar soo baxa ah ee ay Maano isha la heshay, waxayna Luul soo dhaweysay Maano oo xaafadeeda u sii caraabaysay.
Maano mudadii ay xaafada ku soo wajahnayd waxay gashay isla hadal iyo fakar, waxayna mar walba is tusaysay Saleebaan oo aysan muuqaal mooyee xitaa magaciisa aqoon.
Habaynkii waxa uu ku noqday mid dheer waxyana ka seexan weyday muuqaalkiisii oo ku soo laalabanayay, Markii waagu u baryay ayay qoyska quraac hal haleel ah u samaysay waxayna qabatay gurigii Luul oo intay wacday ay u sheegtay in ay ku soo maqantahay.
La soco qaybta 2aad sheekadan oo ah mid xiiso badan
Sagal says:	October 15, 2012 at 5:16 pm	Mxa shekadan ma socoto miya? warqadow.
Reply »	Maslax says:	December 12, 2012 at 6:00 am	Waaw cajib aha lkn waxn idinka codsanaya bahda calaf.net in shekada no si wadan wlhi shekadan waxa aqristay hal kan qeyb mudo 2 bil laga jgo ila hadana wax ad kuso darten ma arag wa codsi no si wada qeybaheda kale mahdsanidin
Reply »	Sahnuun says:	December 12, 2012 at 9:17 am	CODSI:waxan idinka codsanaynaa inaad dhameystirtaan qeybaha ka harsan. sheekadu waxay u muuqataa mid xiiso leh, koowaad ayaaba sidan ah soo qeybaha kale kama darna
Reply »	Liban cape town says:	December 12, 2012 at 2:52 pm	Walalayaal waxa niga codsanaya ina sheekada nodhameestirtan